MSF oo soo afjartay qorshihii ay ku badbaadin jirtay dadka ku tahriiba badda… – Hagaag.com
MSF oo soo afjartay qorshihii ay ku badbaadin jirtay dadka ku tahriiba badda…
Posted on 7 Diseembar 2018 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Hay’adda Dhakhaatiirta aan Xuduudda Lahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo MSF ayaa lagu qasbay in ay soo afjarto qorshihii ay ku badbaadin jirtay dadka ku tahriiba badda Mediterranean-ka.
Markabkan ayaa gacan ka gaysan jiray badbaadinta dadka ku tahriiba badda halista ah iyaga oo Liibiya ka baxaya oo ku sii jeeda qaaradda Yurub, gaar ahaanna dalka Talyaaniga.
Wasiirka Arrimaha Gudaha ee Talyaaniga Matteo Salvini ayaa hay’addaha maraakiibta ku badbaadiya tahriibeyaasha ku eedeeyay in ay gacan saar la leeyihiin dadka wax tahriibiya. Ayna noqdeen sidii Taxi dadka ka soo kaxeeya Liibiya oo keena Talyaaniga”.
MSF oo ku dhawaaqaysa soo afjaridda hawlihii samato bixinta badda ayaa dalalka Yurub oo Talyaanigu u horreeyo ku eedeeyay in ay ku guul daraysteen samaynta qorshe ay iyagu leeyihiin oo dadka lagu badbaadiyo, haddana ay billaabeen xagal daacinta hay’adihii kale ee isu xilqaamay in ay dadka ka badbaadiyaan badda Mediterranean, sida uu ku warramayo wariyaha BBC-da uga soo warrama Qaarada Yurub.